3 Matanho eStrong Dhijitari Isu kune Vaparidzi iyo Dhiraivha Kubatanidzwa & Revenue | Martech Zone
Sevatengi zvave vachifambira vachiwedzera kune epamhepo nhau kushandiswa uye vane zvakawanda zvakawanda sarudzo dziripo, vapurinda vaparidzi vakaona yavo yemari plummet. Uye kune vazhinji, zvave zvakaoma kuchinjira kudhijitari zano inoshanda chaizvo. Paywalls anga achinyanya kuve njodzi, kutyaira vanyoreri kure kune kuwanda kwemahara zvemukati. Ratidza kushambadzira uye zvemukati zvinotsigirwa zvakabatsira, asi zvirongwa zvakatengeswa zvakatwasuka zvinoda vashandi zvakanyanya uye zvinodhura, zvichivaita kuti vasakwanise kusvika kuzviuru zvevashambadzi vashoma.
Kushandisa netiweki yekushambadzira yekuzadza auto-hesheni kwave kwakabudirira, asi izvi zvinovimba zvakanyanya nemakuki evateereri kunongedzera, kugadzira mana makuru emigwagwa. Kutanga, makuki haana kumbove akanyatsojeka. Iwo akanangana nemidziyo, saka havagone kusiyanisa pakati pevashandisi vazhinji pane chakagovaniswa mudziyo (piritsi rinoshandiswa nenhengo dzinoverengeka dzemhuri, semuenzaniso), zvinoreva kuti data ravanounganidza harina kujeka uye harisi iro. Cookies zvakare haigone kutevera vashandisi kubva kune imwe kifaa kuenda kune imwe. Kana mushandisi achichinja kubva palaptop kuenda kune mbozhanhare, nzira yekuki inorasika.
Chechipiri, makuki haasi kusarudza-mukati. Kusvikira nguva pfupi yadarika, makuki akateedzera vashandisi zvachose vasina kubvumirwa, uye kazhinji kazhinji vasingazive, vachimutsa zvinetswa zvakavanzika. Chechitatu, vashambadzi vanovharidzira uye kubhuroka kwakavanzika vakaisa iyo kibosh pakuki-yakateedzera yekutevera senge midhiya inoshuma nezve mashandisiro emakambani - kana kushandisa zvisirizvo, sezvazvingaite - data revateereri rakanganisa kuvimba, zvichiita kuti vashandisi vawedzere kunyumwira uye kusagadzikana. Uye pakupedzisira, kurambidzwa kuchangobva kuitika kwechitatu-bato makuki neese makuru mabhurawuza ane runako rwakawanda-rwunopa ad network makuki null uye asipo.
Zvichakadaro, vaparidzi vakatamburawo kutora mukana wemagariro ekushambadzira mari-kana pamwe zvakanyatsojeka, masocial network akashandisa vaparidzi. Kwete chete aya mapuratifomu abiwa kure chikamu chakakura chekushambadzira kushandisa, asi ivo zvakare vakasundira zvinyorwa zvevashambadziri kubva kunhau, kubira vaparidzi mukana wekupinda pamberi pevateereri vavo.
Uye kurova kwekupedzisira: traffic yemagariro ndeye 100% yekufambisa traffic, zvinoreva kuti kana mushandisi akabaya kuenda kune saiti yemuparidzi, muparidzi ane zero mukana kune data remushandisi. Nekuti ivo havagone kusvika pakuziva avo vekuendesa vashanyi, hazvigoneke kuti vadzidze zvavanofarira uye voshandisa iyo ruzivo kushandira zvimwe zvezvavanoda kuti varambe vachibatirana nekudzoka.
Saka, muparidzi anofanira kuitei? Kuti ugone kuchinjika kuchinhu ichi chitsva, vaparidzi vanofanirwa kutora kutonga kwehukama hwevateereri uye nekuvaka kubatana kwakasimba kune-kune-mumwe pane kuvimba nevanhu vechitatu. Heano maitiro ekutanga neyatanhatu-nhanho dhijitari zano inoisa vaparidzi pachigaro uye inotyaira mari nyowani.
Nhanho 1: Iva Wako Vateereri
Iva nevateereri vako. Panzvimbo pekuvimba nevechitatu mapato senge makuki uye nzira dzekudyidzana, pachinzvimbo, tarisa pakuvaka yako yega yekunyorera base kuburikidza nemasaini epamhepo tsamba tsamba. Nekuti vanhu havawanzo kugovera email kero, uye zvakafanana pane zvese zvishandiso, email ndiyo yakajeka uye inoshanda yakasarudzika yakasarudzika kupfuura makuki. Uye kusiyana nemikana yemagariro, unogona kutaurirana nevashandisi zvakananga pamusoro peemail, uchicheka wepakati.
Nekuita kwakananga uku, unogona kutanga kuvaka mufananidzo uzere weizvo zvinoshandiswa nevashandisi nekutevera maitiro avo uye kudzidza zvavanofarira kunyangwe pamidziyo nematanho. Uye, nekuti email iri yakazara-kupinda-mukati, vashandisi vakangoerekana vapa mvumo yekuti iwe udzidze maitiro avo, saka kune yakakwirira kwazvo danho rekuvimba.
Nhanho yechipiri: Regedza Zvayo Zvikamu Pamatanho Echitatu-Bato Channel
Shandisa nzira dzakananga seemail uye pusha notices kuti ubatanidze vanyorese zvakanyanya sezvinobvira panzvimbo yemagariro nekutsvaga. Zvekare, pamwe nemagariro uye nekutsvaga, urikuisa wechitatu-bato mukutonga kwehukama hwevateereri vako. Ivo vachengeti vemagedhi havangotongi mari yekushambadzira chete asiwo data remushandisi, zvichiita kuti zvikonewe kuti iwe udzidze nezvezvavanoda uye zvavanofarira. Kuchinja kutarisisa kwako kunzira dzaunodzora zvinoreva kuti iwe unodzora data remushandisi zvakare.
Nhanho 3: Tumira Yakakodzera, Yakasarudzika Zvemukati
Iye zvino zvawava kuziva zvakawanda pamusoro peizvo munhu wese anonyorera anoda, iwe unogona kuwedzera aya magero kuti utumire zvemukati zvakasarudzika kune mumwe nemumwe. Panzvimbo yebatch-uye-blast, imwe-saizi-inokodzera-ese email kana meseji inoenda kune vese vanyoreri, kutumira zvakagadziriswa zvemukati zvakaratidza kuve zvinoshanda zvakanyanya kune vanoita vanyori uye nekukudziridza hukama hunogara.
For GoGy Mitambo, yepamhepo yekutamba chikuva, kutumira tsika kusundira Notices chave chikamu chikuru chebudiriro yavo yekubata zano.
Iko kugona kutumira meseji chaiyo uye chakanyanya kukosha chiziviso kune wega mushandisi kwakakosha kwazvo. Ivo vari kutsvaga chimwe chinhu chakasarudzika, uye kufarirwa kwemutambo kwakakoshawo zvakanyanya. Ivo vanoda kutamba zvinoitwa nemunhu wese uye izvo zvoga zvakabatsira kutyaira kudzvanya-thru mitengo kumusoro zvakanyanya.
Tal Hen, GoGy Muridzi
Iyi sarudzo yemukati yakarongedzwa yakatove yakashandiswa nevaparidzi vakaita seGoGy, Assembly, Salem Web Network, Dysplay uye Almanac yevarimi ku:
Rwirai pamusoro pe2 mabhiriyoni ezaziso mwedzi
Tyaira a 25% simudza munzira
Tyaira a 40% kuwedzera mukuonekwa kwemapeji
Tyaira a 35% kuwedzera kwemari.
Nepo zano racho raratidza kuti rinoshanda, unogona kunge uchishamisika:
Ndiani ane nguva uye zviwanikwa zvekutumira zvakasarudzika maemail uye kusundira zviziviso kumazana ezviuru kana mamirioni evanyoreri?
Ndipo panopinda michina. Iyo Jeeng nePowerInbox chikuva chinopa yakapusa, otomatiki mhinduro yekutumira yakasarudzika Push uye email machenjedzo kune vanonyorera ne zero maoko-pane kuyedza. Yakavakirwa zvakanangana nevaparidzi, Jeeng's michina yekufunda tekinoroji inodzidza zvido zvevashandisi uye maitiro epamhepo kushandira kumusoro kwakakodzera, kwakasarudzika uye kwakanangwa zviziviso zvinotyaira mushandisi kubatanidzwa
Pamusoro pekupa mhinduro yakakwana, kusanganisira kugona kuronga zviyeuchidzo kuti ubudirire mukubatana, Jeeng anotobvumidza vaparidzi kuita mari yavo yekusunda uye email inotumira kuwedzera imwezve mari yemari. Uye, neyaJeeng yemari yekugovana modhi, vaparidzi vanogona kuwedzera iyi ine simba otomatiki yekuita mhinduro ine zero kumusoro-kumberi mari.
Nekuvaka yavo yakasarudzika yemukati nzira yekuparadzira nzira yekumisikidza nzira iyo inobvumidza vaparidzi kuva nehukama hwevateereri, vaparidzi vanogona kutyaira traffic yakawanda-uye yepamusoro mhando traffic - kudzokera kune avo mapeji, nekudaro kutyaira yakakwira mari. Kudzidza zvinofarirwa nevateereri vako kwakakosha kwazvo mune ino maitiro uye haugone kuzviita kana uchivimba nechitatu-bato, nzira dzekuendesa. Kutora kutonga kwehukama ihwohwo nematanhi enzira ndiyo yakanakisa nzira yekuvaka dhijitari zano rinokura vateereri vako uye mari.
Kuti udzidze kuti iyo yakazara yakazara Jeeng nePowerInbox inogona kubatsira:
Saina kumusoro kune Demo Nhasi
Tags: ad blockerskugovana zvemukatiCookiesjeengmachine learningmobile noticesvasarudze muanazvonhepfenyuropowerinboxdzikisa noticeskutumira nzira
2020 CRM Statistics: Iwo Mashandisiro, Bhenefiti & Zvinonetsa zveVatengi Hukama Management Mapuratifomu